Tag: data lehibe | Martech Zone
Tag: data lehibe
Fironan'ny MarTech izay mitondra fiovana nomerika
Zoma, Oktobra 22, 2021 Zoma, Oktobra 22, 2021 Pavel Obod
Fantatry ny manampahaizana manokana momba ny varotra maro: tato anatin'ny folo taona lasa, nipoaka ny fitomboan'ny teknolojia marketing (Martech). Ity fizotran'ny fitomboana ity dia tsy hihena. Raha ny marina, ny fanadihadiana farany tamin'ny taona 2020 dia mampiseho fa misy fitaovana teknolojia marketing 8000 mahery eny an-tsena. Ny ankamaroan'ny mpivarotra dia mampiasa fitaovana mihoatra ny dimy amin'ny andro iray ary mihoatra ny 20 amin'ny fanatanterahana ny paikadim-barotra. Ny sehatra martech dia manampy ny orinasanao sy ny famerenam-bola
Mpanjifa vao haingana izay niara-niasa taminay dia nanana maritrano sarotra izay nametaka amina sehatra am-polony na maromaro ary na dia teboka fidirana maro hafa aza. Ny valiny dia fanatobiana taonina, olana momba ny kalitaon'ny data, ary fahasarotana amin'ny fitantanana fampiharana bebe kokoa. Na dia tian'izy ireo aza izahay manampy bebe kokoa, dia nanolo-kevitra izahay mba hamantatra sy hampihatra ny Customer Data Platform (CDP) hitantanana tsara kokoa ireo teboka miditra data ao amin'ny rafitr'izy ireo, hanatsara ny fahamarinan'ny angon-drakitra, hanaraka